Nagarik Shukrabar - महिला किन सन्तुष्ट हुन्नन् ?
बुधबार, २९ असोज २०७६, ०९ : ११
महिला किन सन्तुष्ट हुन्नन् ?
बिहिबार, २१ असार २०७५, ०२ : ५५ | शुक्रवार
प्रायः यौन सम्बन्ध सबैभन्दा निकटका व्यक्तिसँग हुन्छ । आनन्ददायी सम्बन्धका लागि कुनै पनि यौनजोडी शारीरिक र मानसिक रुपमा सम्बन्धका लागि तयार हुन आवश्यक पर्छ । यौन शिक्षाको अभावमा मन मिलेका जोडी बीचको सहवास पनि सुखद् हुन सक्दैन । स्खलन हुनु मात्रै सन्तुष्टि हैन । यस्तो बेलामा यौन साथीमध्ये एक जना तृप्त हुने र अर्को प्यासै रहने समस्यासमेत देखिन्छ ।
यस्तो समस्याले विवाहितबीच अतिरिक्त वैवाहिक सम्बन्धको जोखिम बढ्छ । यौन सन्तुष्टिको मामलामा पुरुषभन्दा महिला निकै संवेदनशील हुन्छन् । शारीरिक र प्राकृतिक रुपमै उनीहरु यस मामिलामा पुरुषको तुलनामा संवेदनशील हुन्छन् ।
पार्टनरले उनीहरुको संवेदनशीलता र भावना नबुझ्दा उनीहरु भड्किने जोखिम रहन्छ । जुन विवाहित र विश्वासिलो पार्टनरका लागि सुखद् पक्ष पक्कै हैन ।
व्यस्तता र मानसिक समस्याले समेत यस्तो अवस्था ल्याउन सक्छ । कुनै–कुनै रोगले समेत यौन गतिविधिमा अप्ठेरो ल्याउँछन् । जस्तो पुरुषमा चिनीरोग लागेको छ भने सिरा र धमनीका पर्खाल बाक्लिँदै जान्छ र रक्त सञ्चार कम हुन्छ । यसले लिंग लुलो हुने, यौन इच्छा कम हुने हुनसक्छ ।
कहिलेकाहीँ शारीरिक र मानसिक अवस्था सबै ठीक छ र नियमित सहवास पनि भइरहेको छ तर महिला यौन साथी सन्तुष्ट नहुने गरेको समेत देखिन्छ । यो महिलामा हुने रोगका कारण समेत हुनसक्छ ।
महिलालाई चिनी रोग लागेको छ र यस रोगमा कुनै संक्रमण भयो भने फंगसको वृद्धि हुन्छ । फंगस वृद्धि हुँदा चिलाउँछ र कन्याउँदासमेत यौन उत्तेजना हुनसक्छ ।
योनिको मूत्रजन्य बाटोको संक्रमण, फंगस, इन्फेक्सन, ट्राइको मोनस लगायतका समस्याका कारणले पनि यौन सन्तुष्टि नभएको अनुभव हुनसक्छ ।
यौनजोडी परिवर्तन गर्ने बानी छ भने पनि एकै व्यक्तिसँगको नियमित सम्बन्धले मात्र यौन सन्तुष्टि नमेटिएको अनुभव हुनसक्छ । यो शारीरिकभन्दा पनि मानसिक समस्या हो । यो पनि एक प्रकारको रोग नै हो ।
महिलामा यौन उत्तेजना धेरै भयो वा श्रीमान्सँग नियमित यौन सम्पर्क गर्दासमेत यौन सन्तुष्टि मेटिएको अनुभव भएन भने यौन पार्टनरसँग खुला छलफल र आवश्यकताअनुसार चिकित्सकको सहयोगसमेत लिनुपर्छ ।
सहवासका क्रममा के राम्रो लाग्छ, के नराम्रो लाग्छ, कहाँ, कुन समयमा सहवास गर्दा बढी आनन्द लाग्छ, कुन पोजिसनमा सहज हुन्छजस्ता विषय मनमा लुकाएर राख्नुभन्दा आफ्नो पार्टनरसँग छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ ।
यौन पार्टनरलाई नराम्रो लाग्ने व्यवहार नगरेको राम्रो । दुवै पार्टनरले बुझ्न आवश्यक छ, सहवासमा हुने सक्रियता शारीरिक मात्रै हैन मानसिक पक्ष पनि उत्तिकै सबल हुन जरुरी छ । यौन पार्टनरबीचको सुखद् सम्बन्धका लागि खुला छलफल अति महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सूचना ः याैन सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा समस्या भए infoshukrabar@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुन्छ । हामी तपाइकाे जिज्ञासा विज्ञ चिकित्सक समक्ष पूर्याएर समाधानकाे उपाय खाेज्ने छाैं ।
जवान रहने जीवनशैली
जवान अवस्थामा सुविधाको उपलब्धताका कारण व्यक्तिले व्यायाम तथा सन्तुलित खानपानमा त्यति ध्यान दिएका हुँदैनन्। असन्तुलित खानपान तथा व्यायामको कमीले बिस्तारै शारीरिक तथा मानसिक असर देखिँदै जान्छ।
मनको कुरा बुझौं
यौन जोडी, परिवार, आफूप्रति सहानुभूति राख्ने व्यक्ति तथा चिकित्सकलाई आफ्नो समस्याको बारेमा खुलेर बताउनु पर्छ। यस्तो बानीले एक त अनुभवीले पनि आफूले जानेको उचित सुझाव दिन सक्छन्। यौन जोडीलाई बताउँदा उसले समस्या समाधानका लागि उचित सल्लाह दिन सक्छ। त्यसैगरी चिकित्सकलाई बताउँदा उपचार गर्न सहज हुन्छ।
म एउटा केटा सँग रिलेसनमा रहेको २ वर्ष भयो। हामी एक अर्कालाई धेरै माया गर्छौैँ। एकअर्कामा छुट्टिएर बस्न सक्दैनाैँ। हामी बिहे गर्न चाहन्छौँ तर विहे असम्भव छ।
Copyright 2019 Nepal Republic Media Pvt. Ltd. | All rights reserved.